true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 6 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Lapho umuntu enze isenzo se-overt abese e-withholder, uvame ukuzama ukuchaza ukuthi i-overt act bekungeyona ngempela i-overt act. Lokhu kubizwa “ngokuzithethelela.”
Sonke sizwe abantu bezama ukuzithethelela ngezenzo zabo, kepha kuze kube manje asikuqondanga kahle ukuthi yini eletha ukuzithethelela.
Ngaphambi kokuthi kube nezinqubo ze-Scientology, bekungekho ndlela lapho umuntu akwazi ukudambisa khona ukuhlupheka ngokwazi ukuthi wenze isenzo se-overt ngaphandle kokuzama ukunciphisa i-overt.
Amanye amasonto namanye amaqembu basebenzise ukuvuma izono ukusiza abantu ukuba bathole impumuzo kuma-overt acts abo. Kodwa-ke, ngaphandle kokuqonda okugcwele konke okubandakanyekile, kuye kwaba nokusebenza okulinganiselwe.
I-Scientology ifakazele ngokuphelele ukuthi uMuntu muhle ngokuyisisekelo—iqiniso elihambisana ngqo nezinkolelo ezindala zokuthi uMuntu mubi ngempela. Njengobufakazi bokulunga okuyisisekelo koMuntu, lapho umuntu ebona ukuthi uyingozi kakhulu futhi wenza iphutha, uzama ukuzenza abe namandla amancane. Futhi uma lokho kungasebenzi futhi usazithola enza izenzo ezigqamile, ube esezama ukuziqeda yena ngokushiya indawo noma ngokubanjwa nokujeziswa.
Isigebengu ngaso sonke isikhathi senza izinto ezenza kube lula ukuthi umuntu ambambe enza okungalungile. Ufuna ukungabi nabungozi emphakathini futhi ufuna ukuthembeka futhi.
Kepha uma lokhu kuyiqiniso, pho kungani engayitholi impumuzo ezinkingeni zakhe ngokutshela abanye ngama-overt acts akhe?
Iqiniso ngukuthi: abantu bagodla ama-overt acts ngoba becabanga ukuthi ukubatshela kungaba ngesinye isenzo se-overt. Kunjengokuthi abantu bazama ukuthatha kubo bonke ububi bomhlaba babufihle. Kepha lokhu akunangqondo, ngoba ngokugodla ama-overt acts, lezi zenzo zigcinwa zikhona, okudala ukuthi ububi obuthintekayo buqhubeke.
Lapho ukuhlupheka nokukhathazeka okuvela kuma overts akhe kukhulu kakhulu, umuntu ubhekana nenye inkinga—indlela yokwehlisa ubukhulu nengcindezi ye-overt. Umuntu angazama ukwehlisa i-overt ngokuzama ukwehlisa usayizi nenani lomuntu abenze i-overt.
Ngakho-ke lapho othile enze i-overt act, uvame ukuzama ukunciphisa ubuhle noma ukubaluleka kwabantu noma izinto isenzo esilimazayo esenziwe kuzo. Isibonelo, indoda engathembeki kumkayo kufanele isho ukuthi umkayo wayengekho muhle ngandlela thile. Unkosikazi owayengathembeki kumyeni wakhe ngokufanayo kufanele anciphise umyeni ukuze anciphise i-overt.
Kulokhu kubonakala ukuthi ukugxekwa kakhulu (ukukhononda ngalokho abanye abantu abakwenzayo okubi noma okungalungile) kuwubulingiswa bokwenza i-overt. Lokhu akusho ukuthi zonke izinto zilungile nokuthi akukho kugxekwa ndawo lapho kufanele khona.
Ukugxekwa, lapho kungasekelwa yiqiniso, kumane kuyimizamo yokwehlisa usayizi wethagethi ye-overt ukuze umuntu aphile (uyethemba) nge-overt yakhe. Vele, ukugxeka umuntu lapho kungafanele futhi kulimaze isithunzi somuntu uqobo kuyisenzo esivelele ngakho-ke lesi “sixazululo” empeleni, asisebenzi.
Izinto ziya ziqhubeka ziba zimbi lapho kwenzeka okulandelayo: umuntu wenza izenzo ze-overt ngaphandle kokuqaphela. Uzama ukuzithethelela ngokuthola amaphutha noma ukusola abanye. Lokhu kumholela kuma-overts okulwa nabo, okuholela ekwehliseni ukusinda kwakhe futhi, kwesinye isikhathi, ukusinda nedumela labantu abasolayo.
Lapho uzwa ukugxekwa ngokweqile nangokhahlo kothile okuzwakala nje kuphoqelekile futhi kungeyona eyemvelo, qaphela ukuthi lo ngumuntu onama-overts ngokumelene nomuntu ogxekiwe.
Umphakathi ujezisa izeqo eziningi ngandlela thile, kepha ukujeziswa okunjalo kuvame ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu.
Abantu abanecala lama-overts bafuna isijeziso sabo, besisebenzisela ukusiza ukuziyeka (banethemba) ekwenzeni ezinye izeqo. Abanye abantu bacela nokubulawa. Kodwa ekugcineni, isijeziso asiyixazululi inkinga eyisisekelo ebandakanyekayo.
Sinezandla zethu kulokhu okwenza lo mhlaba uhlanye. Izindaba ezimnandi ukuthi manje sesingabuyisela ubuhlakani sisebenzisa lolu lwazi nokuqonda.